China CNC Vertical Machining Center fekitori uye vagadziri | Oturn
OTURN yekumachina centre inogadzirwa nemhando yepamusoro Mihanna yakakanda muviri wesimbi uye rutsigiro ruzere rwembabvu, inova kakapetwa kagumi inotyisa-kukunda kupfuura waya yesimbi. Izvo zvakakandwa nembabvu mukati meiyo fuselage zvakawedzera
OTURN yekumachina centre inogadzirwa nemhando yepamusoro Mihanna yakakanda simbi muviri uye yakazara rutsigiro rutsigiro, inova kakapetwa kagumi-inokatyamadza kupfuura yakajairwa simbi waya. Iko castings ine mbabvu mukati meiyo fuselage ine yakanyanya kukwirira torsion kuramba uye super kuvhunduka kuramba. Uye zvakare, iyo yakafara nzvimbo yemukati inobvumidza iyo inoshanda kuti ichinje nyore maturusi uye zvinhu zvekushanda. Iine yakasimba kukakama mamiriro, inogadzira diki tsoka, asi yakakwira-chaiyo uye yakawanda-yebhakitiriya otomatiki michina.
Ou Teng anoshandisa anozivikanwa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kuomarara uye nemazvo mitsara yemasiraidhi njanji. Maitiro acho tekinoroji akafanana nekugadzira mabheyari, ine zero clearance uye ese-anotenderera maitiro ekutakura. Iyo mitsetse inotsvedza ine yakaderera kudyiwa, yakakwira kunyatsoita, uye nekukurumidza yekumhanyisa kumhanya, inosvika pamamita makumi mana nemasere paminiti
Mushini unogadzirirwa nemwenje yepamusoro-yakajeka yemabasa, iri nyore kune anoshanda kurodha uye kuburitsa mapepa ekuita uye kuita zviyero. Chiedza chebasa chine mashandiro ekusina guruva, isina mvura uye kuputika-chiratidzo.
Yekukurumidza, yakapusa, yakavimbika uye yakareba-hupenyu chishandiso kuchinjisa chishandiso inopa yakatsetseka uye yakavimbika chishandiso chinjana. Iyo yakasarudzika turu yekutsinhana chishandiso dhizaini, iko kugona kusarudza maturusi pane chero chinzvimbo, inogona kukurumidza kusvikwa nePLC software control.
X akabatana kufamba
Y akabatana kufamba
Z akabatana kufamba
Kure kubva pamhino yechokurukisa kuenda kune yekushandira
Kure kubva pakati penzvimbo yekurukisa kusvika kunzira yepamberi yekoramu
Kunonyanyisa mutoro webbench
Double zononoka chip kubviswa
Yakapetwa chip chip kubvisa chishandiso, chakabayirwa kune inonyorera chip kubvisa muchina pamativi ese emuchina, inogona kutumira nyore nyore yakagadziriswa simbi machipisi kunze kwemuchina nekukurumidza, ichideredza kutambisa kwekusa-kugadzirisa nguva nekuda kwekubviswa kwesimbi machipisi .
Yese michina inoshandisa laser kuyera, kucheka bvunzo, kwenguva refu kumhanya-mune bvunzo uye kuomarara kuongororwa maererano neVDI 3441 standard, kuitira kuti imwe neimwe axis iite kudzokorora kwakanaka uye kumisikidza kwakaringana, kuve nechokwadi muchina kunyatso.
Chidenderedzwa chekuyera chiridzwa Renishaw chinoshandiswa kugadzirisa kutenderera uye iko kwejometri kurongeka kwemuchina, nekudaro kuongorora uye kuona iko kutwasuka kwakaringana kwenzvimbo nhatu-dzenzvimbo.
Iyo sleeve-yerudzi rwekurukisa dhizaini inopa 6000 / 4500rpm giya-inotyairwa chokurukisa kana bhandi-mhando chokurukisa, uye ipfupi-nosed chokurukisa kutakura zvinonyatso tsigirwa nesleeve nemusoro kukanda, saka inogona kusimudzira zvakanyanya kuomarara kwesimbi. The chokurukisa injini anogona kuratidza kunonyanyisa simbi nokuveza zvazvingava. With chokurukisa kutonhora hurongwa, tembiricha simukai kubereka anogona kuderedzwa kuwedzera upenyu chokurukisa.
Pashure: Gantry Type 5-akabatana hwokugaya hwakabvira Machine
Zvadaro: Flat Rudzi Lathe